बलिउड / हलिउड Archives - Page4of 57 - Purbeli News
अनलाइन ठगीको सिकार बनिन् सनी लियोनी
काठमाडौं / बलिउड अभिनेत्री सनी लियोनी जहिल्यै आफ्नो हटनेसका कारण चर्चामा आउछिन् । तर यसपटक उनी हटनेस नभई ठगीको सिकार बनेको समाचारले चर्चामा छिन् । भारतमा अनलाइनका माध्यमबाट ठगी गर्ने चलन बढिरहेको बेला यी अभिनेत्री पनि यसबाट पीडित बनिन् । अभिनेत्रीले आफ्नो प्यान कार्डको प्रयोग गरेर कसैले ऋण लिएको दाबी गरेकी छन् । उनले ट्विटरमा ट्विट गर्दै यो कुरा...
काठमाडौं / बलिउडका प्रख्यात संगीकार बप्पी लहरीको मंगलबार बेलुका ११ बजे ६९ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनले मुम्बईको जुहूस्थित क्रिटी केयर अस्पतालमा अन्तिम श्वास फेरे । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई मंगलबारनै अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । बलिउडमा ‘बप्पी दा’ भनेर चिनिने उनी संगीतकारसँगै कुशल गायक पनि थिए । उनी लोकप्रिय हुने अर्को कारण उनले लगाउन...
काठमाडौं / बलिउडमा कहिले ‘मस्तानी’ बनेर त कहिले ‘शान्तिप्रिया’ बनेर अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले आफ्नो अभिनयको आगो र सुन्दरताले फ्यानलाई मोहित बनाएकी छन् । उनको नाम बलिउडको सर्वाधिक पारिश्रमिक लिने अभिनेत्रीको सूचीमा सूचीकृत छ । आफ्नो करियरमा दीपिकाले सम्पत्ति र लोकप्रियता खुबै कमाईन् । उनको अहिलेको कुल सम्पत्ति सय करोडभन्दा बढी नै छ । तर, सायद कम...
नयाँ दिल्ली / भारतका चर्चित संगीतकार बप्पी लाहिरीको निधन भएको छ । आफ्नो डिस्को बीट्सका लागि परिचित लाहिरीको ६९ वर्षको उमेरमा गएराति मुम्बईको एक अस्पतालमा निधन भएको हो । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याबाट पीडित लाहिरी एक महिनाअघि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनलाई सोमबार नै अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो । तर, मंगलबार उनको स्वास्थ्यमा अकस...
को हुन् पुष्पा स्टार अल्लु अर्जुनकी श्रीमती स्नेहा रेड्डी ?
काठमाडौ । साउथ सुपरस्टार अल्लु अर्जुनको फिल्म ‘पुष्पा’ले बक्स अफिसमा हंगामा मचाएको थियो । यसको स्टन अझै पनि चलिरहेको छ । यो फिल्मले उनको लोकप्रियता अत्याधिक थप्यो । अहिले अल्लु अर्जुनको बारेमा सबै कुरा जान्न जो कोही इच्छुक छन् । उनको परिवार, छोराछोरी, श्रीमतीको बारेमा जान्नको लागि मानिसहरुमा झनै उत्साह छ । यस रिपोर्टमा हामी तपाईलाई अल्लु अर्जुनक...
कोभिडका कारण मेमा पुग्यो ‘आइफा अवार्ड’
काठमाडौं / २२औं संस्करणको भारतको प्रतिष्ठित फिल्म अवार्ड ‘आइफा अवार्ड २०२२’ कोभिडका कारण सरेको छ । यो अवार्ड आगामी २० र २१ मेमा हुनेछ । अवार्ड आयोजकले विज्ञप्तिमार्फत अवार्डमा आउने विश्वव्यापी दर्शकको संख्यालाई ध्यानमा राख्दै तत्कालका लागि अवार्ड मेसम्म सारिएको जनाएका छन् । अवार्ड आबुधाबीको यस आइसल्यान्डमा हुनेछ । यसपटकको अवार्ड भारत स्वतन्त्रता...
काठमाडौं /‘भारत रत्न’ लता मंगेशकरको आइतबार ९२ वर्षको उमेरमा निधन भयो । कोरोना संक्रमित भएपछि मुम्बईको ब्रीच केन्डी अस्पतालमा भर्ना भएकी उनले अस्पतालमै अन्तिम श्वास फेरिन् । उनको निधनपछि भारतभर शोकको लहर छाएको छ । लताले सन् १९४२ मा आफ्नो करियरको सुरुवात गरेकी थिइन् । उनले फिल्म ‘महल’को गीत ‘आएगा आने वाला’बाट पहिचान पाएकी थिइन् । लताले विश्वभरका करिब...
काठमाडाै‌ / सुप्रसिद्ध भारतीय गायिका लता मंगलेशकरको निधन भएको छ । ९२ वर्षीया मंगेशकरको आइतबार बिहान मुम्बईको ब्रीच कैंडी अस्पतालमा निधन भएको भारतीय मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् । दैनिक भास्करका अनुसार कोरोना भाइरसका अनुसार २९ दिनअघि कोरोना संक्रमित भएर अस्पतालमा भर्ना भएकी पाँच दिनअघि रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । तर, निमोनिया निको नहुँदा उनलाई आइ...
गायिका लता मंगेशकरको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक
काठमाडौं / बलिउडकी गायिका लता मंगेशकरको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनेको छ । केही दिनयता स्वास्थ्यमा सुधार देखिए पनि अहिले पुनः समस्या भएपछि उनलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको छ । समाचारअनुसार उनको मुम्बईस्थित ब्रीच केण्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. प्रतीत समदानीले गायिकाको स्वास्थ्य अवस्था पुनः बिग्रिएको पुष्टि गरेका छन् । ‘उ...
कहाँ छन् बलिउड अभिनेता राजकिरण ?
काठमाडौं / बलिउड फिल्म ‘बुलन्दी’, ‘कर्ज’, ‘घर हो तो ऐसा’, ‘तेरी मेहरनबानियाँ’लगायत सुपरहिट फिल्ममा अभिनय गरेका अभिनेता राजकिरण वर्षौदेखि गुमनाम छन् । राजकिरण ८० को दशकका प्रायः हरेक फिल्मको हिस्सा हुन्थे । एक समय सूर्यको किरण जस्तंै चम्किएका उनको जिन्दगीमा कहिलेबाट अध्यारोले छोया कसैलाई थाहा छैन । राजकिरण जबसम्म फिल्ममा थिए, उनलाई सबैले स्वागत ग...